आज उसको याद आयो !! - NA MediaNA Mediaआज उसको याद आयो !! - NA Media
आज उसको याद आयो !!
आज धेरै पछि तिम्रो याद आयो निर! याद त सधै नै आईरहन्थो, तर आज अलिक धेरै आयो निर! सन्चै त छौ होला नी हई! आजकल के गर्दै छौ तिमी,कहाँ छौ तिमी आजकल! समय ले मानिस लाई कहाँ वाट कहाँ पुर्याउदो रहिछ हगी निर! ´´के सोचेको को थियौ जिन्दगीमा के भयो आज `` यही गित ले मनेझै भयो है निर!
सपना त धेरै वुनेको थिए,वुन्न नपाई उडाई लग्यो हुरीले कहिल्यै नभेटीने गरी! याद छ निर कलेज पढ्दा का ति दिनहरु! निर तिमीलाई त याद छैन होला हई,याद भएको थियो भनेत त कम्तीमा एकफेर त फोन गर्न सक्थियो होला नी हगी किन यति धेरै निष्टुरी वनेको निर! संगै वाच्ने,संगै मर्न वाचा खाएका हामी, कहाँ भुल हुन पुग्यौ हामीमा! पहिला त भन्ने गर्थियो तिमी विना त मेरो जिन्दगी अपुरो छ,मलाई कहिल्यै छोडी नजाउ है भन्ने तिमी आज ति वाचा कहाँ गए तिम्रा!
के ति वाचाहरु भन्नका लाई मात्र थिए त,किन यसो गर्यो निर, आखिर झुटा नै वोल्नु थियो भने पहिला नै किन भनिनौ निर!मैले त तिमीलाई चोखो माया गरेको थिए! जिन्दगी संगै विताऊने तर के भयो आज कहील्यै नसोचेको! ति दिन तिमलाई थाहा छ !कलेजको पहिलो दिन, गोदावरी जादाको त्यो पल सम्भना अझै ताजा छन् मेरो मानसपटलमा निर! तिमलाई त याद होला या नहोला मलाई थाहा भएन!ति पलहरु कति मिठा थिए मेरा लागी तिमलाई त सायद नहोला पनि!जिन्दगी सोचेको जस्तो कस्को पो हुन सक्छर! तैपनी एक किसीमको आस भने सवै मा हुन्छ नी होईनर निर!
जिवन जिउनको लागी आराम,मोज मस्ती,र सम्पती मात्र त थिए न नी निर तर तिमले त त्यही सुख सयल लाई चुन्यौ हगी! ठिकै होला तिमले सम्पतीलाई ठुलो मान्यौ त्यो तिम्रो वढी आवस्य थियो होला! अव त जिन्दगीले धेरै कोल्टे फेरी सक्यो अव त वाकीँ त्यही सम्झना मात्र त होनी!
निर सम्झना छ तिमलाई हामी शिवपुरी हाईकिग जादाको त्यो पल,तिमी वाटोमा हिड्दा लडेको,अनी तिमी डाको छोडी रोहेको अनी अनिसले तिमीलाई गाडी सम्म वोकेर लगेको,यस्ता सम्झना त धेरै थिए अव त्यही सम्झना मात्र त रहयो नी !जिन्दगी यस्तै रहिछ कहिले मिलन कहिले त विछोड! निर आजकल तिमी कहाँ छौ,अव त तिम्रो नानु पनि तिमी संगै खेल्ने भई सकिन् होलिन् हगी,
पति जि को व्यापार राम्रैत चल्दै होलानी,कहिले कुन देश कहिले कुन देश हुने तिमी आजकल कुन देशको कुन कुनामा छौ तिमी! रमाईलो गर्न र घुम्ने त पहिल्यै देखिको सोखिन हौ तिमी,त्यही त पुरा गर्नलाई छौडौ मलाई,सायद यति धेरै इच्छा त पुरा गर्न सक्थिन होला तर कोसीष भने गर् थिए होला मैले पनि!
मलाई लाग्थियो जिन्दगी शुख दु:ख को मिलन हो,त्यसमा तिमीले साथ दिन्छौ जस्तो लागेको थियो तर सव उल्टो भईदियो! ठिकै छ जिन्दगी सोचेको जस्तो कसको पो हुन्छ र अव त्यसरी चित् वुझाउनु वाहेक शिवाय के नै होला र! वश् अव यसैमा चित् वुझाउछु!
निर तिमीले चालेका प्रत्येक कदमहरु सफल होस् तिम्रा सवै इच्छा,आकान्छा हरु पुरा होस उही तिम्रो!! उही तिम्रो .........................!!
- गोरखा हाल काठमाडौं
कथा: विदेशको मोह
रत्नपार्क: एक अनौठो प्रेमकथा
आज बुध्द जयन्ति रे,बुध्द सँगै खोजनु छ !
विश्व आज केही परीक्षा दिंदैछ
मेरै देश प्यारो
पिडित नेपाली हरुको सहयोगार्थ स्याङ्गजा सहयोग समाज साउदी अरब द्वारा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता को आयोजना गरिने